Ogaden News Agency (ONA) – Xubnaha Faraca M-xorriyo ee IFO oo Maanta kulan Muhiim ah yeeshay.
Xubnaha Faraca M-xorriyo ee IFO oo Maanta kulan Muhiim ah yeeshay.
Posted by Wariye Qaran	/ June 30, 2018
Waxaa maanta oo ay taariikhdu kubeegantahay 30/06/2018 ka xerada IFO ee deegaanka Dhadhaab kadhacday shirkii xubnaha faraca Muftaaxul Xorriyo oo siheer sare ah loosoo Abaabulay iyada oo ay kasoo qayb galeen inta badan xubnaha, maamulka faraca iyo Marti sharaf kala duwan .
shirkan oo ahaa mid caadiyan bishiiba mar laqabto ayaa loogu talagalay in lagaga arinsado hawlaha shaqo ee faraca oo ay xubnaha iyo maamulku iswaydaarsadaan warbixino kala duwan iyo wixii kaqabsoomay qodobadii lagu go,aamiyay kulamadii hore.
Hadaba kulankan oo maanta kakoobnaa dhawr qaybood ayaa Ahmiyad gaar ah ulahaa xubnaha waxaana wacdi iyo warbixin wakhti qaatay kadib kulanka looga dooday qodobo dhawr ah oo miiska saarnaa dhamaantoodna salka kuhaya hawlaha guud iyo geedi socodka halganka lagu baadi goobayo gobanimada Ogadenia ee ay JWXO majaraha uhayso Fikir uruurin iyo falanqayn dheer kadibna waxaa laysla meel dhigay go’aamo muhiim ah oo kadhashay qodobadii kulanka iyada oo hoostana laga xariiqay in lafuliyo go’aamadan.
Intaa wixii kadanbeeyay waxaa kulanka soo gabagabeeyay makerefoonkana lagu wareejiyay Shekh kamida Culimada Somalida Ogadenia oo duco dheer ugu duceeyay dhamaan shacabka dulmani in uu xaqiisa helo asagoo sheekhu Ku celceliyay in uu ilahay guuleeyo geesiyada halgamaya ee had iyo jeer cadawga kahortaagan shacabka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan wuxuuna kulanku kusoo dhamaaday guul iyo dareen wanaagsan